Ahoana ny fijanonana amin'ny fandraisana macOS betas | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fijanonana tsy handray macOS betas
Isaky ny volana jona, Apple dia mandefa ny beta voalohany an'ny iOS, macOS, tvOS ary watchOS, kinova vaovao amin'ny rafitra fiasa rehetra tonga amin'ny kinova farany tamin'ny volana septambra. Hatramin'ny nanokafan'ny Apple ny programa beta ho an'ny daholobe Apple mba ahafahan'ny mpampiasa mampiasa ny betas, mpampiasa maro no nisoratra anarana ary efa ampahany amin'ny fanehoan-kevitra izay ilain'ny Apple afaka mandroso haingana kokoa amin'ny fampivoarana ny rafitry ny fiasan'izy ireo. ny Mpandrindra aloha faly anefa amin'ity safidy ity maro ny hafa no tsy te-ho fanavaozana ny fitaovany amin'ny beta farany ny orinasa Cupertino monina ao amin'ity programa beta ity.
Soa ihany, sahala amin'ny nanasoniavantsika ny programa beta ho an'ny daholobe, Apple dia mamela antsika handao azy ihany koa ary hijanona tsy handray fampandrenesana momba ireo beta farany misy farany hanavao ny Mac anay. Tsotra tokoa ny fomba hanaovana izany tsy mila fahalalana be dia be hanatanterahana azy.
Atsaharo ny fahazoana macOS betas amin'ny Mac
Mandeha amin'ny System Preferences izahay.
ao anatin'ny Taratasy rafitra mankany amin'ny kisary izay maneho ny App Store.
Ao amin'ny safidin'ny fikirakirana ao amin'ny App Store dia mitady an'io safidy io izahay "Ny solosaina dia namboarina mba hahazoana fanavaozana ny rindrambaiko beta". Tsindrio ny Change
Hiseho ny varavarankely iray manontany antsika raha tena te hijanona tsy handray fampandrenesana ho an'ny kinova beta vaovao an'ny macOS izahay. Avy amin'ireo safidy asehony antsika dia hofidintsika Aza mampiseho fanavaozana rindrambaiko beta.
Raha avela ny programa beta ary atsahatra ny fahazoana vaovao farany, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny manao io fanovana io rehefa mamoaka ny kinova farany an'ny macOS ampiasaintsika i Apple amin'izao fotoana izao, hahazoana antoka fa manana ny kinova macOS farany napetraka izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fijanonana tsy handray macOS betas
Genís Deusedes dia hoy izy:
Fa maninona no tsy azoko io safidy io?
Valiny amin'i Genís Deusedes
Apple manakana ny fanitarana ny tetikasa Titan any Detroit
Ianaro ny fomba hanatsarana ny fahombiazan'ny mailaka amin'ny macOS Sierra